Kedu nke kachasị mma ngwaọrụ Amazon mgbe ọ na-abịa n'ịhazi njirimara na nkwụnye ego?
Ọ na-abịa na-enweghị ikwu na akpaaka bụ isi ihe ịga nke ọma ọ bụla na-ere ahịa ọ bụghị naanị na Amazon, kama ihe nzuzo nzuzo nzuzo nke azụmahịa dum ecommerce ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mbupu ọrụ. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ụfọdụ ngwaọrụ kachasị mma Amazon iji nyere gị aka n'ịhazi ọnụahịa na nchịkọta ndepụta iji nọrọ na asọmpi ahịa dị egwu na-ebute ụzọ maka ndị asọmpi kachasị gị.
Nke a bụ listi dị mkpirikpi nke usoro ihe eji eme ihe gosipụtara na-egosi ma ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma nke Amazon ị na-atụ aro ka ị gbalịa na mbụ:
9) Repricer Express - bụ otu n'ime ngwá ahịa kachasị mma nke Amazon ma ọ bụrụ na ị na-emeri ihe ndị ọzọ ịzụta igbe n'ejighị ọrụ ọ bụla na-ewe oge ma rụọ ọrụ dị mkpa. N'iji nkenke, nhọrọ a nwere ike ijikọta ngwọta kachasị mma nke ịnye ọnụahịa nke onwe ya, yana ịzụ ahịa na nchịkọta aha. Enweghi ike ịtọ ahịa ahịa gị dabara na otu n'ime usoro ndị a, dị ka ịkụ ndị ahịa asọmpi site na ọnụahịa ụfọdụ, ọnụahịa ọnụahịa nke ndị iro gị, ịmegharị ụgwọ nke gị nke dị elu / ala karịa ndị ọzọ na ahịa, ma ọ bụ ileghara anya onye omempụ na-enye ihe ụfọdụ.
Okwu ndị ahịa - a ghọtara dịka otu n'ime ngwaahịa kachasị mma Amazon maka nhazi njirimara ngwaahịa - valid security services ltd. Okwu ndị ahịa na-enye aka na atụmatụ ya bara uru bụ ndị anakọtara ọ bụghị naanị na Amazon, kamakwa ha gbakọtara site na ntanetị ndị ọzọ dị na Walmart, Jet, wdg. Gbasara ya, na okwu ndị ahịa nwere ike imecha nyocha kachasị mma na njikwa maka ọ bụla ngalaba nke ndepụta ngwaahịa gị - site na nchịkọta ngwaahịa na nkọwapụta, na njide ihe na ihe ọ bụla metụtara data-dabere na nchọpụta kachasị agbanwe nke ndị na-ere ahịa na-esi na niche gị.
Seller Engine Plus - na-anọchite anya ya dum na-ejikọta àgwà kachasị mma nke ngwaọrụ kachasị mma Amazon. Ngwaọrụ a nwere ike inyere onye ọ bụla na-ere ahịa aka ịmalite ịzụ ahịa ahịa na Amazon site na mpaghara ndị a: ntinye ngwa ngwa na ngwa ngwa ntinye ngwaahịa, ndepụta ndị dị elu na ọrụ FBA, njikwa ngwa ngwa, ngwa ngwa na ngwa ngwa, ndepụta nchịkọta, akwụkwọ ozi nzipu ozi maka akụrụngwa, na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ bara uru nke ndepụta na mbiputa njikwa.
Osimiri Cleaner - a makwaara dịka ngwá ọrụ dị ukwuu maka nyochaa ndepụta nke ngwaahịa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onwe ya. Osimiri Cleaner abụghị ngwá ọrụ dị iche ma ọ bụ usoro ntanetị n'ịntanetị, ọ bụ ntinye ihe nchọgharị Chrome dị mfe ma dị mfe iji dịkwuo oke. Ihe ndị a kachasị elu nke nhọrọ a gụnyere ndụmọdụ ndị dị na njirimara nke ọma na ndị ọkachamara ị ga-enwe ọganihu n'elu ebe ahụ, usoro nchịkọta ndepụta nke ndepụta ngwaahịa, ngwọta ngwa ngwa maka okwu isiokwu abụọ na ogologo oge ọdụ ahịrịokwu, atụmatụ ọsọ ọsọ nke ịchọpụta elu / ala arụ ọrụ ọ bụla maka mgbasa ozi PPC ọ bụla, nkwekọrịta kwesịrị ekwesị na max maka usoro nhazi ngwa ngwa maka ụdị ngwaahịa ọ bụla, yana nchọpụta dị mma maka iwu site n'aka aha onye na-ere ahịa, nyocha nke ekwentị, nchịkọta ederede na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ nke akpaaka maka gị ịtọ ntọala Amazon n'ezie ere.